बिज्ञान -प्रबिधि Archives - KTMreports.com
अब फेसबुकले बताइदिनेछ तपाईको आर्थिक हैसियत
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अब प्रयोगकर्ताको आर्थिक अवस्था कुन हैसियतको हो भन्ने कुरा सजिलै बताइदिने भएको छ ।प्रयोगकर्ताको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाबारे बताउने प्रविधि ल्याउने तयारीमा फेसबुक लागेको छ ।कम्पनीले प्रयोगकर्ता निम्न, मध्यम वा उच्च कुन वर्गका हुन् भनी बताउने प्रविधिका लागि प्याटेण्ट आवेदन दिएको बताइएको छ । फेसबुकले...
एजेन्सी- आफ्नो मृत्यु कहिले हुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । मृत्युको ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्ने विधि दुनियामा अहिलेसम्म विकास भएको छैन । तर अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले भने मृत्युको भविष्यवाणी गर्ने प्रविधिको विकास गरेका छन् ।क्यालिफोर्नियास्थित स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको दाबी गरेका छन् ...
गुगलमा २०१८ को सुरुवातमा सर्बाधिक के खोजियो
एजेन्सी । सन् २०१८ को पहिलो हप्तामा मानिसहरुले गुगलमा सबैभन्दा धेरै के के खोजे भन्ने कुराको पनि गुगलले जानकारी प्रदान गरेको छ ।गुगल सर्च रिजल्टले यो प्रष्ट पारेको छ की सन् २०१८ मा धेरै मानिसहरुको न्यू इयर रिजोलुसन अर्थात् नयाँ वर्षमा गरेको एउटा प्रण चाहीँ आफ्नो जिउको वजन कम गर्नु रहेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो हप्तामा...
काठमाण्डौ । फेसबुकका पूर्व कार्यकारी चामठ पलिहापिटियाको यो भनाइले संसारका धेरै ठाउँमा हलचल मच्चाएको छ ।कम्पनीका पूर्व उपाध्यक्ष पलिहापिटियाले फेसबुक विस्तार गरेकामा पछुतो भएको बताएका छन्। ‘स्ट्यानफोर्ड ग्रयाजुएट स्कुल अफ बिजनेस’ का विद्यार्थीमाझ भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘मैले काम गर्दा फेसबुक यति भयानक हुन्छ भन्न...
आजदेखि नेपाल टेलिकमको ‘विन्टर अफर’, कति रुपैयाँमा कति बोनस ?
काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले जाडो मौसमका लागि विभिन्न प्रकारको ‘विन्टर अफर’ ल्याएको छ । आजदेखि लागु हुनेगरी विभिन्न प्रकारका डाटा प्याक र बोनसकारुपमा डाटा स्ट्रिमिङ प्याकसमेत उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । डाटा स्ट्रिमिङ प्याक युट्युब र वाउटाइम एप्समार्फत टिभी हेर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । जिएसएम प्रिपेड÷पोष्टप...
कस्ले हेर्दैछ तपाईको फेसबुक प्रोफाइल ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईलाई तपाईको फेसबुक प्रोफाइल कसले हेरिरहेको छ भनेर जानकारी चाहिएको छ भने अब गुगल क्रोमको बाउजरबाट संम्भव भएको बताइएको छ।अजवगजव नामक भारतीय अनलाईनको दावी अनुसार फेसबुक प्रोफाइल कसले हेरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । सोही अनलाइनलाई आधार मान्दै गरेको कोशिषमा केही प्रोफाइल भिजिटरहरुको लिष्ट आयो । यो प्रमाणित हो कि होइन...
आफ्नो स्मार्टफोनलाई सधै नयाँ राख्ने ५ काइदा
स्मार्टफोन पूरानो हुँदै जाँदा यसको रुपरंग मात्र होइन यसको कार्यक्षमता पनि घटिरहेको हामी सबैले अनुभुत गरेको कुरा हो । स्मार्टफोन पूरानो भएर स्लो हुँदै जाँदा हामीले यो किन्ने बेला यस्तो थियो भनेर सम्झिन्छौँ । र, त्यस्तै भैराखे त हुने नी भन्ने कल्पना गर्छौँ । आखिर पूरानो भैसकेको चिज फेरि नयाँ हुने त कुरा भएन । तर यद...
स्मार्टफोन बारेका ५ धारणा, जुन सत्य होइनन्
स्मार्टफोन आधुनिक जिन्दगीको अहं हिस्सा बनिसकेको छ । तर यसको बारेमा अहिले पनि धेरै मानिसहरु गलत जानकारी तथा भ्रमहरु लिएर बाँचिरहेका छन् । स्मार्टफोनको ब्याट्री, क्यामरा, प्रोसेसर तथा एप आदिको बारेमा जोडिएका केही धारणाहरु सायद तपाइँ हामीलार्इ पनि सही लागेको हुनसक्छ । तर वास्तवमा यी भ्रममात्र हुन् । धारणाः प्रोसेसर ...
नेपाल आइडलका साथमा ‘ओपो एफ-फाइभ’को फर्स्ट सेल
काठमाडौं । ओपोले निकै प्रतिक्षारत सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, एफफाइभको विक्रि आरम्भ नेपाल आइडलहरुको साथमा गरेको छ । ओपो एफफाइभ नेपाली बजारमा ब्राण्डकै पहिलो एफएचडी+ फूल स्क्रीन डिस्प्ले मोडल हो । यसमा कम्पनीले अत्याधुनिक एआई ब्यूटी प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । विक्रि आरम्भको शुरुवात ओपोले अहिले चर्चाको शिखरमा रहेका ...
एप्पलको आइफोन भलै अत्याधुनिक फिचरयुक्त फोन किन नहोस्
एप्पलको आइफोन भलै अत्याधुनिक फिचरयुक्त फोन किन नहोस् तर यसका प्रयोगकर्ताहरुले अन्य स्मार्टफोनमा जस्तो डुअल सिम फिचर मिस गरिरहनु परेको छ । तर आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि एउटा खुसीको खबर आएको छ । अब आइफोनमा पनि दुईवटा सिमकार्ड हालेर चलाउन पाइने दिन धेरै टाढा छैन । समाचार अनुसार, एप्पलले आफ्नो आगामी संस्करणको आइफोनमा ड...